(အိုင်တီ) ၀ ိုင်ဆိုင် WeVino မှသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူခြင်း
သင့်အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ပါသည်။ 13 Tri Regolamento (UE) 2016/679 (cd "GDPR"), la Investo Srl, Trieste ရှိ cone sede legale, San Lazzaro 13 မှတစ်ဆင့် P.IVA 01259300323 ("WEVINO.STORE"), အရည်အတွက် di Titolare del trattamento, WEVINO.STORE အရောင်းအဝယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်နှင့်လေကြောင်းလိုင်း၏အရည်အသွေးပြည့် ၀ သောလေကြောင်းလိုင်းများသည်အရည်အသွေးပြည့်မီသောနည်းစနစ်များကိုသာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။
အထူးသဖြင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာ ("Sito") သည် WEVINO.STORE နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကွန်ယက်အတွင်းရှိဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံနေရသော Sito မှတာဝန်ယူသည်။
အသုံးပြုသူများသည် Sito ကိုတင်ဆက်သည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဥရောပနှင့်ယူနီဆက်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဘဏ္trattာရေးနှင့်ဘဏ္ibutာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ 28 del GDPR ။
တာတိုလာရီတာတာတာတာတာတာတာ ၀ န်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပေးသည့် ၀ န်ထမ်းများ၊
သန့်ရှင်းရေးဌာနသည်တာတဲလ်လာဒယ်လ်တာတဲရွန်ဒိုမှတာ ၀ န်ခံများအားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသည်။
WEVINO.STORE အနေဖြင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ("Dati") ကိုအပြီးသတ်ပြုလုပ်နိုင်သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များ၊
၁) သတင်းအချက်အလက်၊ အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှု၊ အချက်အလက်များ၊ လိပ်စာများ၊
2) အီးမေးလ်လိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်, တယ်လီဖုန်းနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ;
3) dati bancari (es IBAN), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊
4) အိုင်ပီသို့ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အိုင်ပီသို့ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်၊ ဆာဗာကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းများ၊ ဆာဗာများ၊ နံပါတ်များကိုဆာဗာ (အချက်အလက်များ၊ အမှားများ၊ ဒေ။ );
(၅) ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအခွင့်အလမ်းနှင့်ကုန်ကြမ်းအလိုက်သမ ၀ ါယမ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စာရင်းအင်းအနိမ့်အမြင့်များ၊
သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မညီညွတ်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ GDPR ၏ ၉ ကြိမ်မြောက်အခွင့်အရေးများကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။
WEVINO.STORE utilizzerà i suoi dati per seguenti finalità:
က) l'esecuzione del contratto နှုန်း
ငါ Dati indicati al paragrafo 2, nn ။ 1-4, WEVINO.STORE ၏ခွင့်ပြုချက်အရ SARN သည်သဘောတူစာချုပ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Sito နှင့် fruizione dei servizi ad esso specificatamente connessi ။ တစ် ဦး သည်စံပြပုဂ္ဂိုလ်များ, တစ် ဦး သည်တစ် ဦး သည် Gestione degli ordini d'acquisto, manutenzione ed assistenza tecnica နှုန်းထားများနှင့်အပူချိန်ညှိနှိုင်းမှု, တစ်စုံတစ်ရာအမှုအရာ, အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်သည်။ Titolare အတွက်အိမ်ယာမြေများကိုပြန်လည်ငှားရမ်းခြင်း။
သဘောတူခွင့်ပြုချက်တစ်ခုအနေဖြင့်လိုအပ်သောအချက်အလက်များ၊ သင်၌ဖြစ်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းမရရှိပါက erogarle il servizio richiesto ဖြစ်သည်။
Vendita diretta ။ ကြွယ်ဝချမ်းသာသောကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် WEVINO.STORE ၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုဆိုင်ရာအထူးသဘောတူညီချက်၊ စနစ်များအလိုအလျောက်စနစ် (အထူးသဖြင့် e-mail, SMS, push, not pushhe) စနစ်များကိုစနစ်တကျသုံးခြင်း (es, posta cartacea) ။
စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအတွက်အချက်အချာကျမှု 2, nn ။ 1 င2။
အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ info@wevino.store ကို scrivendo
သတင်းလွှာ ငါ Dati indicati al paragrafo 2, ။ ။ 2, WEVINO.STORE တစ်ခုတည်းကိုသာတစ် ဦး တည်းကောင်းသောသတင်းလွှာ richiesto အတွက်သတင်းစာစောင်မှသတင်းစာများနှင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွက်မှားယွင်းနေသည်။ ငါ l'erogazione del servizio richiesto al Titolare နှုန်းထားများ ရေရှည်တွင်ရေရှည်တည်တံ့သောရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကိုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွင်ဖော်ပြပြီးသတင်းစာစောင်တွင်ဖော်ပြပါအချက်များအရလက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းသာဖြစ်သည်။
Soft spam များ ငါ Dati di cui အယ်လ် paragrafo 2, ။ ။ 2, WEVINO.STORE စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်စီးပွားဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စီးပွားဖြစ်ကုန်သွယ်ရေးဆွေမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆွေမျိုးစီးပွားဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစီးပွားဖြစ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်။ Suo espresso consenso ai sensi dell'art ။ 130 del d.lgs ။ 30 ရက် giugno 2003, ။ ။ ၁၉၆၆ တွင် volta ရှိကျေးကျွန်များ၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုအရှိန်အဟုန်ကိုဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးရလဒ်အနေဖြင့်နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုဖော်ပြသည်။
ဂ) finalità di profilazione နှုန်း
WEVINO.STORE စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုအတွက်သင့်လျော်သောစျေးနှုန်းများသည်အရည်အသွေးပြည့်မီသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။
WEVINO.STORE မီးဖိုချောင်သုံးကိရိယာနှင့်အချက်အလက်များ 2, nn ။ 1-2 င5။
WEVINO.STORE ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသာယာ ၀ ယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း။ WEVINO.STORE နှင့်ဤနိုင်ငံ၏ခွင့်ပြုချက်အရသိပ္ပံပညာနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များသည်အလယ်အလတ်တန်းစားဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သောအခွင့်အလမ်းကောင်းများကိုရရှိစေရန် (အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပါက) အလွန်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေကိုအနိမ့်အမြင့်လျှော့ချနိုင်ခြင်း။ WEVINO.STORE sulla Sua sfera giuridica သည် '' အစစ်အမှန် dell profilazione svolta da '' ။
Le ricordiamo che, ai sensi dell'art ။ ၂၁ GDPR, Lei potrà opporsi in the end of the end of the end, in motivi connessi alla Sua situazione particolare, scrivendoainfo@wevino.store
WEVINO.STORE ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်အီးမေးလ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်တွန်းအားပေးသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကဏ္SMSမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများ။
- Abbig парламентo, moda, accessori, calzature, Ottica, bigiotteria, gioielleria, orologi;
- la cura degli occhi နှုန်းနှင့်ထုတ်ကုန်များ၊
- အပိုပစ္စည်း ၀ တ်စုံ၊
- ဟိုတယ်၊ itinerari, ristoranti, အပန်းဖြေစခန်း, agriturismo, autolinee, အိပ်ရာ & နံနက်စာ, ostelli - Turismo, Aeroporti, voli, sconti su biglietti, convenzioni, viaggi, hotel
- Organizzazione eventi၊ nozze၊ ပါတီ၊
- Bambinieprima infanzia, beni အီး servizi, giocattoli, articoli အီး servizi နှုန်း gestanti အီး neomamme;
- ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ ၀ င်ရောက်ကျူးကျော်မှုနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊
- ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး (စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ လူမှုရေး၊ လူမှုရေး၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်မှု၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
- ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာအထူးပြု၊ အထူးကျွမ်းကျင်မှု၊ မာစတာ၊ recupero scolastico, assistenza alla preparazione universitaria, scambi cultural;
- ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အိမ်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်း၊ piattaforme d'investimento - ကုန်ပစ္စည်းများဘဏ္finanzာရေးနှင့်ဘဏ်များ၊
- လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်: materassi, poltrone, sollevatorieascensori, ergonomiche vasche, dispositivi vari anche elettronici;
- Ricerca အီး selezione di ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, offerte di lavoro, စင်မြင့်, tirocini;
- ကုန်ပစ္စည်းများ alimentari, biologici, agricolturaaKM သုည;
- Bevandeesfot အချိုရည်၊ vinieliquori;
- စွမ်းအင်သောက်သုံးမှုနှင့်ပေါင်းစပ်မှု alimentari (corretta alimentazioneefitness)
- ကုန်ပစ္စည်းများ la la cura del corpo၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူ၊ မိတ်ကပ်၊ လက်သည်းအနုပညာ၊ အလှကုန်စင်တာ ed estetica, trattamenti, cromoterapia, solarium, palestra, trattamenti termali, articoli sportivi;
- အီး microderma ထိုးဖောက် Tatuaggi;
- Bricolage အီး fai နေ့စွဲ;
- Depositi temporanei, သိုလှောင်ခြင်းနှင့်အလားတူ;
- အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှု၊ alloggioetrattamenti;
- ဖုန်းနံပါတ်၊ ဂြိုဟ်တု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ဆင်တူသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊
- intrattenimento multimediale၊
- Abbonamentiacanaliapagamento, ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ပေးချေခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့်ဝယ်လိုအား၊ ecc ။ ;
- စီဒီ၊ ဒီဗီဒီ၊ Bluray၊ ထုတ်လွှင့်မှုများကိုအီးမေးလ်၊
- Canali tematici musicali, hobbistici, cucina, tecnici, cultural, ecc;
- ရောင်းဝယ်ရေး၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စရပ်အမျိုးမျိုး၊ postproduzione၊ Montaggio mixaggio;
- အားကစား၊ ကန်ဒီဒီကတိ၊ အ ၀ တ်အစား၊ အထူးပြုပြင်ခြင်း၊ abbonamenti, scontistica, abbiglamento, accessori, palestre, centri sportivi, manifestazioniegare;
- Tecnologia၊ ကွန်ပျူတာ၊ tabelt၊ fotocamere၊ တယ်လီဖုန်း၊ တီဗီနှင့် HiFi၊
- Progettazione d'interni, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းပုံစံ၊
- အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်ကုန်စည် - အခွန်နှင့် ၀ န်ထမ်းများ၊
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု၊ အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဝဘ်ဒီဇိုင်း၊ လူမှုရေးကွန်ရက်နှင့်အင်တာနက်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု။
- Telefonia mobile, mobile operator, tariffeepromozioni, servizieiniziative;
- Associazioni, အုပ်စုများ, ritrovi, volontariato, impegno လူမှုရေး;
- အီလက်ထရွန်နစ်အီးမေးလ်၊ အီးဘွတ်ခ်ျ၊ စာတမ်းများ၊ စာနယ်ဇင်းများ၊ စာကြည့်တိုက်များ၊ စာကြည့်တိုက်များ၊
- la casa, l'auto, la persona နှုန်းထားများနှင့်သက်ဆိုင်သောနှုန်းထားများ၊ သက်သာသောနှုန်းထားများ၊ နှုန်းထားများ၊
- Autoscuole, recupero အချက်များ, auto အလိုအလျောက်, patenti အထူးပြု, rinnovo patenti;
- မော်တော်ယာဉ်၊ ညှိခြင်း၊ အလိုအလျောက်ကား၊
- Mare, lagoefiume: ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
- Passatempi scherzosi basati su oroscopi, နက္ခတ်ဗေဒင်, magia, cartomanzia, tarocchi, prevision ရလဒ်များကိုအားကစားescommesse;
ကျွန်ုပ်သည် WEVINO.STORE ၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တည်ရှိနေသောအချက်အလက်များကိုအရည်အသွေးပြည့်မှီသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။
စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအတွက် 1, nn ။ 1 င2။
ogni momento တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် info@wevino.store
ကွန်ရက်ဆာဗာတွင်လယ်ယာမြေရောင်းချသည့်လယ်ယာမြေများဖြစ်သော Oracle NetSuite သည်ဥရောပ၏ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Regify Unito ၏ဥယျာဉ်မှူးဖြစ်သည်။
WEVINO.STORE နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အစဉ်အလာအရအဆက်အသွယ်ရှိသည့်အခါ ၁၀ နှစ်တွင်အမြင့်ဆုံးတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် Titolare အတွက်စာကြည့်တိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်အနေဖြင့်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုကိုကြည့်ပြီး 2, lett ။ (ခ) တစ် ဦး လျှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်အတွက် Lei Prestato သို့မဟုတ် esercizio del Suo diritto di the contramento of the trattamento ။
အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်အားဖြင့် ၁၂ မီလီမီတာရှိသောအပူချိန်ထိန်းညှိစနစ်သည်လေယာဉ်မှူးများအနေဖြင့်အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိစေရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ opposizione al trattamento ထိုသို့အတိုက်အခံပြုမှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, အစဉ်အလာအရနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်အရအတိအကျပယ်ဖျက်ရန်လိုအပ်သည်။
giudizio အတွက် 5. Difesa
ကျွန်ုပ်သည် WEVINO.STORE တွင် ၀ င်ရောက်နိုင်သောစွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးနောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
WEVINO.STORE တွင်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်၏ဗဟိုအချက်အချာကျသောနေရာတွင်ယာယီတပ်ဆင်ထားသည်။ WEVINO.STORE ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို Braintree မှ ၀ န်ဆောင်မှုပေးပြီး PayPal, Inc ၏လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
WEVINO.STORE utilizza la tecnologia cookie ကိုအသုံးပြုသည်, တစ်ပြိုင်နက်သွားလာရန်လွယ်ကူသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုချက်ပြုတ်ရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
8. Diritti degli အသုံးပြုသူများ
ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ကြားပို့ချပေးသည် - i i seguenti diritti
- WEVINO.STOREe၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်း၊
- iediedereeeeeeee- - - - - - - - - - - - -e-e--cell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ere - - ရှေ့။
San Lazzaro 13 မှ Trieste မှတစ်ဆင့် Investo Srl သို့အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ info@wevino.store o tramite raccomandata A / R လိပ်စာသည် Investo Srl သို့ကူးပြောင်းသည်။
WEVINO.STORE si riserva la facoltà di modificare oangkicemente aggiornare il contenuto della presente Informativa Privacy, tutto o in parte in ။ WEVINO.STORE သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း။
Lazzaretto 2, 34015, Muggia နှုန်း Strada
ဖုန်းနံပါတ်: 393341416791 +